Asphalt 8: Airborne - Fun Real Car Racing Game APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ကတ္တရာ 8: ဝေဟင် - ပျော်စရာရီးရဲလ်ကားပြိုင်ပွဲဂိမ်း
ကတ္တရာ 8: ဝေဟင် - ပျော်စရာရီးရဲလ်ကားပြိုင်ပွဲဂိမ်း APK ကို
သငျသညျမြန်နှုန်းတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးစဉ်အပေါ်ကသူတို့ကိုယူအဖြစ်ကတ္တရာသုံး 8 ခုနှစ်, သငျသညျ, ကားများအနေဖြင့်စက်ဘီးမှအစဉ်အမြဲ created အပူဆုံး, အများဆုံးက high-performance ကိုအိပ်မက်စက်တွေအချို့အတွက် Race ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါမီးလောင်နီဗားဒါးသဲကန္တာရထဲကနေတိုကျို၏တင်းကျပ်စွာအလှည့်ဖို့, သင်ထိပ်ရန်သင့်လမ်းမပေါ်တွင်စိန်ခေါ်မှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် Arcade ပျော်စရာ၏လောကဓာတ်ကိုရှာဖွေမယ်!
အစစ်အမှန်ဇိမ်ခံ DREAM CARS & မော်တော်ဆိုင်ကယ်!
•ကျော် 220 က high-performance ကိုကားများနှင့်သင်မောင်းနှင့်၎င်းတို့၏ကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန်တွန်းအားပေးရန်အဘို့အစက်ဘီး။
•ထိုသို့သော Lamborghini က Veneno, Bugatti 16.4 Grand Sport Vitesse, Ferrari ပြိုင်ကား LaFerrari, McLaren P1, Porsche 911 GT3 RS, Ducati Monster 1200 နှင့်ပြိုင်ကားမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်ရွေးချယ်ရေးအပါအဝင်ပိုမိုအဖြစ်ထိပ်တန်းလိုင်စင်ရထုတ်လုပ်သူများနှင့်မော်ဒယ်,!
• Customize & စတိုင်နှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်ကိုဆင်းယူ 2,300 decals ကျော်နှင့်သင်၏စီး upgrade!
ကတ္တရာ 8 နဲ့ဝေဟင် GET
•ချဉ်းကပ်လမ်း Hit နှငျ့သငျသင့်ကားသို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်နှင့်အတူဆွဲငင်အားမှကောင်းကင်သို့အခမဲ့ခြိုးဖကျြအဖြစ်ရူပဗေဒ၏ကန့်သတ်ထက်ကျော်လွန်ပြိုင်ပွဲယူပါ!
•စည်လိပ်နှင့်သားရိုင်း360º Perform သင်သည်သင်၏ပြိုင်ဘက်အတိတ်ကပျံဝဲအဖြစ်ခုန်။
•သင့်မြန်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနှင့်ပန်းတိုင်အစာရှောင်ရာလမ်းကြောင်းရှာတွေ့သင့်ကားသို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်အတွက်ရူးသွပ် position နဲ့ဆက်ဆံချွတ်ဆွဲနေစဉ်လေကြောင်းမှတစ်ဆင့်တိမ်း။
•ထိုကဲ့သို့သောဗင်းနစ်, ပြင်သစ်ဂီယာနာ, အိုက်စလန်သည်နီဗားဒါးသဲကန္တာရ & အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နေရာများအဖြစ် 40 settings အမျိုးမျိုးအတွက်ကျော် 16 မြန်နှုန်းမြင့်ပုဒ်ဖြတ်ပြီးသင့်ကားသို့မဟုတ်ဆိုင်ကယ်စီး!
•သင့်ခြေချောင်းပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်ဖို့သေချာရဲ့အလုပ်ရှာဖွေရေး mode မှာတစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့စိန်ခေါ်မှုသေချာစေရန်မူရင်း mode ကိုသို့မဟုတ်ယင်း၏မှန်အပြောင်းအလဲ၌သငျလိုခငျြဆိုလမ်းကြောင်း Race ။
•နေ့စဉ်တည်နေရာတစ်လျှောက်လုံးကိုဝှကျထား shortcuts တွေကို၏ Discover ပဒေသာ။ သူတို့ကိုကျွမ်းကျင်ယှဉ်ပြိုင်ထိပ်ရန်သင့်ဂိမ်းမြှင့်ဖို့သေချာပါ!
SPEED မထင်မှတ်အတွက်အကြောင်းအရာတစ်ခုအဆုံးမဲ့ Streams!
•9ရာသီ & ပင်အများဆုံးအတွေ့အကြုံရှိကားစိန်ခေါ်မှုများနှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်မြင်းစီး၏ပဒေသာနှင့်အတူအလုပ်ရှာဖွေရေး mode မှာ 400 ဖြစ်ရပ်များ, ကိုကျော်။
•ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံရိပ်ယောင်မျိုးဆက်သစ် shader, Real-time ဂျီသြမေတြီရောင်ပြန်ဟပ်မှု & အခြားအံ့သြဖွယ် HD ကိုသက်ရောက်မှုမှကျေးဇူးတင်စကား။
•ပြိုင်ကားအပေါ်တစ်ဦးလတ်ဆတ်တဲ့လှည့်ကွက်များအတွက်ရောဂါကူးစက်ခံရမှုနှင့်ဂိတ်နစ် Modes သာထွက်ကိုစစ်ဆေးပါ။
အဆုံးစွန် multiplayer Race အတွေ့အကြုံ!
•ဂီယာတက်အစစ်အမှန်ကစားသမား 8 မှတက်ဘို့တစ်ပြိုင်နက် multiplayer အရေးယူဘို့!
•ကစားသူအများအပြားရာသီ & လိခ်! မှတ်ဂိုးသွင်းနှင့်ကန့်သတ်အချိန်ပြိုင်ပွဲရာသီအတွက်ဆုသော့ဖွင့်ဖို့နဲ့အခြားကစားသမားများဆန့်ကျင်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ကား။
•သင်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ရှိသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် '' တစ္ဆေကားများနှင့်စက်ဘီးကိုလိုက်အဖြစ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလူမျိုးမှမိတ်ဆွေများကဝံ့။
•သင့်ပြိုင်ကားအောင်မြင်မှုများ Share နှငျ့သငျအဆုံးစွန်မြန်နှုန်းစက်နေသက်သေပြ။
သင့်အသက်ကို Rev တေးဂီတ
အစာရှောင်ခြင်း Arcade ပြိုင်ကားအဘို့သင့်လိုအပ်ချက်မောင်းထုတ်ရန်ကတ္တရာသုံး 8 များအတွက်လိုင်စင်အံ့သြဖွယ်ဂီတ၏တစ်ဦးနှလုံး-thumping ရောနှော•။
•သင်ကစားသင့်ရဲ့စတိုင်ကိုစိတ်ကြိုက်နှင့်ပိုကောင်းအောင်ကြိုက်သို့သော်သင့်ရဲ့အပေါ်မျက်နှာပြင် icon များနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပြန်စီ။
ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးကိုမှန်ကန် HD ကိုတန့်-ပြိုင်ကားအတွေ့အကြုံအတွက်အဆင်သင့်ရှိသနည်း သငျသညျက high-ကထုတ်တဲ့ဆိုင်ကယ်များစွာတို့တွင်အ, သင့်အိပ်မက်တွေကို၏ Ferrari ပြိုင်ကား, မာစီဒီး, ဒါမှမဟုတ် Audi ကားကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား? သငျသညျသဲမြန်နှုန်းတစ်ခု insatiable လိုအပ်ချက်ရှိပါသလား ကောင်းပြီ, ဒီကတ္တရာသုံး 8 go and download ရန်သင့်အစိမ်းရောင်အလင်း, အစာရှောင်ခြင်းစဉ်းစားပါ!
Facebook မှာ: http://gmlft.co/A8_Facebook
Instagram ကို: instagram.com/asphaltgames
YouTube ကို: http://gmlft.co/A8_YouTube
ဤအချိန်-ကန့်သတ်ထားဖြစ်ရပ်အတွက်ပြိုင်ဘက်မှီဖို့က high-tech tools များကကြိုးတန်ဆာဆင်!
ကတ္တရာ Tournament နွေရာသီ 2019
အဆိုပါ CCXR Trevita, Ford ကား GT ကိုနှင့် Aston Martin Vantage ပိုပြီးအံ့သြဖွယ်ဇူလိုင်လအတွက်လာမယ့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာထူး join ...
အဆိုပါ Bentley Continental က GT100 သော့ဖွင့်ဖို့အထူးဖြစ်ရပ်အတွက် Bentley ရဲ့ 3th နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကျင်းပ!
ကတ္တရာ 8: ဝေဟင် - ပျော်စရာရီးရဲလ်ကားပြိုင်ပွဲဂိမ်း
76.10 ကို MB